iTunes for Windows 10 - Ungalanda Futhi Usebenzise Kanjani? - Ungakwenza Kanjani
Ingabe ungumlandeli omkhulu we-Apple, amadivayisi ayo ahlakaniphile, nezinhlelo zesoftware? Uma kunjalo, isizathu sisobala impela. I-Apple ingenye yezimpawu ezinkulu kakhulu eziphumelelayo emhlabeni futhi ibilokhu imangele kakhulu ngamaphakeji ayo esoftware, phakathi kwayo okuyi-iTunes eyodwa. Ingenye yezingcezu ezinhle kakhulu zesoftware yokuphequlula ukuzijabulisa komsindo nevidiyo emhlabeni jikelele. Ama-iTunes anokutholakala kwawo kwamafoni we-apula, ama-iPod, ama-Mac. Futhi into ethokozisa kakhulu ukutholakala kwe-iTunes Windows 10 I-PC.
I-iTunes inephakheji yama-movie, imibukiso ye-TV, nezingoma, nezinye izinto ezihlobene nezwe lezokuzijabulisa. Yipulatifomu ehamba phambili lapho ungalandela khona abaculi bakho obathandayo bese uthola ukukhishwa kwakamuva. Futhi manje, ungajabulela umculi wakho oyintandokazi noma i-movie kwizibonisi ezisezingeni eliphakeme nekhwalithi ephezulu yomsindo ngisho naku-Pc yakho efakwe iwindi 10.
Ngenkathi wehla nendatshana yethu uzokwazi, ukuthi kungani kufanele ucabangele ukulanda i-iTunes, nokuthi ungayilanda kanjani futhi uyisebenzise ngendlela elula.
Ufuna Ezinye izindlela ze-iTunes ? Bheka esigabeni sethu sebhulogi.
Kungani Khetha i-iTunes Windows 10 PC?
Akungabazeki ukuthi usebenzisa amafasitela amahle kakhulu kepha okushodayo kuphela yisoftware engakutholela umtapo wolwazi ophelele wokuzijabulisa okwakudala nokwanamuhla ngokuchofoza okusheshayo. Ukukhetha i-iTunes kungaba yisinqumo esihle kunazo zonke osenzayo ngesikhathi sakho sokuzijabulisa. Okulandelayo ngezinye zezici zayo ezivelele ezizokusiza ukwazi ukuthi kungani kufanele uthole i-iTunes Windows 10 I-PC.
Kukwenza ulahle izinyanda zama-CD obekufanele uphathe phambilini.
Inazo zonke izinhlobo zomculo, imibukiso, nama-movie ngokuchofoza okukodwa.
Ukubonakala kwayo kusezingeni eliphakeme okusiza ukukugcina usendaweni ebushelelezi nenethezekile ngenkathi ubuka ibhayisikobho noma umdlalo we-TV.
Ukuqoqwa kwezingoma, ama-movie, nezinhlelo ze-TV kubanzi kakhulu futhi kukhulu.
Isici selabhulali sithakazelisa kakhulu lapho ukwazi ukubuka khona ukuqoqwa ngumculi, isiqephu, noma i-albhamu. Kwenza usesho lwakho lusheshe.
Iyakwazi ukungenisa umculo kuma-CD.
Inhlangano ehlabayo enokwezifiso zohlu lwadlalwayo.
Inezilawuli ezikrinini ezikuvumela ukuthi udlale amavidiyo omculo.
Vumelanisa okuqukethwe kumadivayisi akho.
Zonke izici eziyishumi ziyakwazi ukukholisa abasebenzisi be-tech ukuthi i-iTunes ingaba inketho engcono kakhulu kuwe yokusakaza futhi ujabulele ukuzijabulisa komsindo nevidiyo.
Izinyathelo zokuthola i-iTunes ye-Windows 10 PC:
Ngaphandle kweqiniso lokuthi i-iTunes iyamangalisa ukuyisebenzisa futhi izuzisa abasebenzisi bayo ngokuthenga nokulanda izingoma zabo abazithandayo, imibukiso ye-TV, ama-movie, nama-podcast ngemizuzu, ibuye inikeze indlela elula yokulanda nokuyisebenzisa nakumafasitela akho e-10 pc .Kunezinyathelo ezi-8 ezilula zokulanda le software emangalisayo ye-iTunes yama-windows 10 pc.
Qalisa isiphequluli sewebhu -Ngokuya ngobulula bakho nokubekwa phambili phezulu isinyathelo sokuqala okufanele usithathe ukwethula isiphequluli sakho sewebhu osithandayo se-pc yakho.
Zulazulela kuwebhusayithi -Ukuze ufinyelele isoftware ye-iTunes, ngemuva kokwethula isiphequluli sakho osithandayo, kufanele uzulazule kuwebhusayithi ye-Apple iTunes i.e. www.apple.com/itunes/download .
Chofoza ku- 'Landa Manje' -Ngemuva kokuzula iwebhusayithi, kungadingeka ukuthi uskrole kancane bese uchofoza ku- 'Landa Manje' ukuqala inqubo yokulanda isoftware yakho ye-iTunes oyithandayo.
Chofoza ku- “Save” -Kuphela ngemuva kokuchofoza ukulanda manje lapho uzonikezwa khona inketho yokuthi 'Gcina'. Chofoza kuso ukuze uqhubeke nenqubo yokulanda.
Chofoza ku- “Run” -Kulula ukulanda. Emva kwalokho uchofoze ku- 'Gcina', i-iTunes izolandwa kungakapheli imizuzu futhi izokunikeza ithuba lokuthi 'Run'. Chofoza kuso ukuze usebenzise isoftware ku-pc yakho.
Chofoza okuthi 'Okulandelayo' -Ngemuva kokuchofoza ku- 'Run' kufanele uchofoze ku- 'Okulandelayo' ukuqhubeka nenqubo.
Chofoza ku- 'Faka' -Ngemuva kokuchofoza ku- 'Okulandelayo' uzonikezwa ithuba lokuchofoza ku- 'Faka'. Chofoza kuso uma unelisekile ngokuphelele ngenqubo yokufaka.
Chofoza ku- “Qeda” -Lesi yisinyathelo sokugcina okufanele usithathe ukuqedela inqubo yokulanda / yokufaka. Chofoza ku- 'Qeda' ukuqeda inqubo yokufaka.
Manje, njengoba usuqede zonke izinyathelo ezidingekayo ukulanda i-iTunes yamawindows 10 pc manje usungakujabulela ukulanda izingoma zakho ozithandayo, imibukiso ye-TV, ama-movie, njll. Kepha linda! Kuthiwani ngokusetshenziswa. Ingabe ukhathazekile ngokuthi uzokwazi kanjani ukusebenzisa i-iTunes kuma-PC akho e-windows 10? Ungakhathazeki sizokunikeza umhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo wokuthi ungayisebenzisa kanjani i-iTunes yamawindows 10 pc.
Ungayisebenzisa Kanjani i-iTunes ku-Windows?
Landela lesi umhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo ukwazi ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-iTunes kuma-PC akho e-windows 10.
Dala i-ID ye-Apple:
Ukuqala ukusebenzisa i-iTunes ku-pc yakho kufanele uqale wenze i-Apple id. Kufanele ulandele lezi zinyathelo ezilandelayo ukudala i-apple id.
Qalisa i-iTunes kudeskithophu yakho bese uchofoza ku- 'Akhawunti'
Chofoza okuthi “Ngena ngemvume”
Chofoza ku- 'Dala i-Apple ID entsha' bese uchofoza ku- 'Qhubeka'
Vumelana 'Ngifundile futhi ngiyavumelana nale migomo nemibandela'
Thayipha ikheli lakho le-imeyili, iphasiwedi (thayipha futhi ukuze uqinisekise)
Khetha umbuzo wokuphepha nempendulo (amahlandla ama-3)
Khetha usuku, inyanga, unyaka bese uqhafaza uqhubeke
Chofoza indlela yokukhokha bese ufaka inombolo yekhadi (gcwalisa yonke imininingwane)
Thayipha idolobha lakho, isifundazwe, ikheli leposi, inombolo yocingo
Chofoza ku- 'Dala i-Apple ID'
Chofoza okuthi 'KULUNGILE' ukuqedela inqubo.
Gunyaza i-pc yakho ku-iTunes Windows 10:
Qalisa i-iTunes kusuka kudeskithophu yakho bese uchofoza ku- 'Akhawunti'
Chofoza okuthi 'Ukugunyazwa' bese uthi: 'Gunyaza le Khompyutha'
Thayipha iphasiwedi yakho bese uchofoza u-'Gunyaza '
Thuthukisa ilabhulali yakho yemidiya ku-iTunes yamawindows 10 PC:
Qalisa i-iTunes kusuka kudeskithophu yakho bese uchofoza ku- 'Ifayela'
Faka Ifayela Kulabhulali
Chofoza Ifayela noma ifolda ofuna ukuyingenisa ku-iTunes.
Phinda inqubo kaningana kuwo wonke amafayela noma amafolda ofuna ukuwangenisa ku-iTunes.
Thenga okuqukethwe kusuka ku-iTunes:
Isinyathelo sokugcina ukuthenga okuqukethwe kwakho okuthandayo kusuka kusoftware ye-iTunes.
Qalisa i-iTunes kusuka ku-Desktop bese uqhafaza ku- “Store”
Chofoza isidleke se- “Intengo” entweni ongathanda ukuyithenga
Thayipha iphasiwedi yakho bese uqhafaza ku-buy.
Ungathenga eziningi ozikhethele zona futhi uzothola ngayinye yazo kulabhulali yakho uma usuqedile ukuthenga.
Manje njengoba unesiqondiso ngesinyathelo ngesinyathelo sokulanda nokusebenzisa isoftware emangalisayo kakhulu ye-iTunes, landela lezi zinyathelo ezilula futhi ujabulele izingoma zakho ozithandayo, imibukiso ye-TV, nama-movie nge-iTunes efasiteleni le-10 PC. Nge-iTunes kuma-windows 10 PC akho, wena-me-time uzogcwala ubumnandi, ukuphumula, nokuzijabulisa. Yenza i-PC yakho ingenise nge-iTunes futhi awusoze wazisola ngesinqumo sakho.
Ezinye izindlela zeMovie zeWindows 10
ama-movie amasha wamahhala ku-hd
panda ingoma id for roblox
Uhlelo lokusebenza lwe-chromecast lwe-pc windows 7
ungabona kanjani ukuthi ngine-amazon prime
imibukiso yamahhala ye-tv esakazwayo